Qaraxyo ka kala dhacay wadada Warshadaha iyo KM13 ee duleedka Muqdisho – SomaliaOne News Network
Jun 30, 2017 Tajuddin WARARKA 0 1600 Views By Tajuddin
Somali National Army ( SNA).
Muqdisho, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) – Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay xaqiijinayeen in qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso uu ka dhacay Laamiga Warshadaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Warshada Taraqa iyo Sigaarka, waxaana qaraxaasi lala eegtay kolonyo gaadiid ah ay la socdeen Ciidamada AMISOM.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in Kolnyo gaadiid ah ay wateen Ciidamada AMISOM qaraxa lala eegtay xili ay marayeen Laamiga Warshadaha, waxaana qaraxaasi miino uu waxyeelo gaarsiiyay mid kamid ah gaadiidkaasi.
Ciidamada AMISOM ayaa qaraxa kadib rasaas xoogan kor u furay, waxa ayna ciidamada oo ka daatay gaadiidkii ay wateen markii dambe isaga dhaqaaqeen goobtii lagu qarxiyay iyaga oo horey u jiitay gaari waxyeelo kasoo gaartay qaraxaasi.
Wali lama oga khasaaraha qaraxan ka soo gaaray Ciidamada AMISOM, mana jiro ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay Taliska ciidamada AMISOM iyo laamaha ammaanka dowlada Soomaaliya oo ku aadan qaraxan saakay ka dhacay Muqdisho.
Dhinaca kale, qarax xoogan oo ah nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Deegaanka Tareedisho (KM13), waxaana qaraxan lala eegtay ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya.
Goob joogaaal ayaa ku waramay in qaraxa lala eegtay gaari Cabdi Bille ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Qaraxa miino ayaana la sheegay in uu haleelay gaariga Cabdi Billaha oo marayay Laamiga isku xira Muqdisho iyo Afgooye.
Labo askari oo ka tirsan Ciidanka dowladda ee qaraxa lala eegtay ayaa lasoo sheegayaa in ay geeriyoodeen, waxaa sidoo kale jira khasaaro dhaawacyo ah.
Qaraxa kadib ciidamadii ka badbaaday gaariga la qarxiyay ayaa rasaas badan kor u raday, waxaana ciidamada bad baaday iyo cidamo kale oo u soo gurmaday halkaasi ka qabteen dhoor qof ay ku tuhmayaan in ay ka dambeeyeen qaraxa Miino.
Laamiga isku xira Magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa marar badan waxaa ka dhacay qaraxyo miino oo lala eegtay gaadiidka ay wataan ciidamo ka tirsan dowladda, waxaana wadadaasi oo ku burburtay dagaallo sokeeyye aanay weli helin olole dib loogu dayactirayo.
Weerarada noocaan oo kale ah ayaa lagu yaqaanaa kooxda Al shabaab oo weli dagaal kala horjeedda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Al Shabaab oo go'doomisay deegaan uu ku sugan yahay Abuu Mansuur iyo ciidamo gurmad oo gaaray Khan Shaykhun Sarin Attack: United States strongly supports the FFM and JIM efforts
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo...
Ra’iisul Wasaare Khayre oo qaabilay...
Ra’iisul Wasaaraha oo shir...
Shirweyne loogu yeeray Cafis oo ka...
Washington (SOMALIAONE.NET) - According to a US State Department press release,Today, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)...